Linux bug inotisiya isu takatarisana nekurwiswa kuburikidza neWi-Fi | Linux Vakapindwa muropa
Sekureva kwemuchengeti wekuchengetedza, Senior Injiniya kuGithub, kune bhagi muLinux izvo zvinogona kubvumidza zvishandiso padhuze nesu kushandisa maWiFi masaiti ekuvharira kana kukanganisa zvigadzirwa zvisina njodzi. Kukanganisa kwekuchengetedza kuripo mune mutyairi weRTLWIFI, anoshandiswa kutsigira Realtek WiFi machipisi mumidziyo inoshandisa masisitimu anoshanda eLinux. Zvakaipisisa pane zvese, isu hatifanirwe kuita chero chinhu kune mushandisi ane utsinye kuti ashandise kusagadzikana, chingo sangana nezvimwe zvinodiwa.
Iyo bhaggi inokonzeresa kuzadza kwakawanda muLinux kernel kana komputa ine Realtek WiFi chip iri mukati mechinhu chakaipa. Mune mamiriro akanakisa mamiriro, iko kushandisa kunogona kukonzera iyo inoshanda system kupunzika, asi zvinogona zvakare kubvumidza anorwisa kuti awane kutonga kuzere kwekombuta. Mukufunga. Chinhu chinonyanya kunetsa ndechekuti mhosva haina kugadziriswa sezvo yakawanikwa mu2013, apo iyo yepamusoro-ku-zuva kernel yaive Linux 3.10.1.
1 Bug iripo muLinux kubvira 2013
2 Zvishandiso chete zvine Realtek chip zvinokanganiswa
Bug iripo muLinux kubvira 2013
Bhugi iri kuteverwa pasi pezita rekuti CVE-2019-17666 uye, makore matanhatu gare gare, yatove afunga chigamba chekuzvigadzirisa, Chitatu chekupedzisira kuti zvive chaizvo. Zvinotarisirwa kuti zvakataurwa chigamba chichaverengerwa muLinux kernel mumazuva mashoma anotevera, asi ivo havana kujekesa kana izvi zvaizoreva kuti iyo bug yaizogadziriswa nekutanga kwe Linux 5.4 Ichaitika mukupera kwaNovember kana kutanga kwaZvita.
Asi kana paine munhu ane hanya nechikanganiso ichi, zvingangoita kuti hazvina kutorwa zvakanyanya nekuda kwechikonzero: Nico Waisman, muongorori wezvekuchengetedza, anoti haisati yawana humbowo hwepfungwa umo kushupika kunoshandiswa kuita kodhi yakaipa, saka ivo vachiri kutaura nezve chimwe chinhu chedzidziso. Kune rimwe divi, Waisman anoti «kukundikana kwakakombaSaka zvakanaka kuti uzvimise mumwe munhu asati abva mune dzidziso yekudzidzira.
“Ndichiri kushanda papurazi, uye zvinonyatso… zvinotora nguva (chokwadi zvinogona kunge zvisingaite). Pepa, iko kufashukira kunofanirwa kuve kushandiswa. Pakaipa, iko kuramba basa; kesi yakanaka kwazvo, unowana goko. '
Zvishandiso chete zvine Realtek chip zvinokanganiswa
Kunetseka kunogona kuvhurwa kana mudziyo wakakanganiswa uri mukati mediyasi kubva pachinhu chakaipa, chero bedzi iyo WiFi ichiitwa, uye isingade kubatana kubva kumushandisi wekupedzisira, ndokuti isu. Iyo yakaipa kifaa inoshandisa kusagadzikana nekushandisa iyo yekuponesa simba inozivikanwa se "Cherechedzo cheAscence" iyo inosanganisira Wi-Fi Direct, muyero unobvumidza maviri madhijitari kuti abatanidze kuburikidza neWiFi pasina chinodiwa chekupinda napo. Kurwisa kunoshanda kana mutengesi-akasarudzika ruzivo rwezvinhu akawedzerwa kune maWi-beacon. Kana muchina unodzivirirwa ukavagamuchira, zvinoita kuti Linux kernel buffer iwedzere.
Iyi bhagi inongokanganisa zvishandiso zvinoshandisa Linux anoshanda masystem uye Realtek chip kana WiFi iripo. Kana tikashandisa chipu cheWi-Fi kubva kune mumwe mugadziri kana isu chave chakadzimwa, chimwe chinhu chakakosha kana tikabatanidza chete neEthernet uye hatina mimwe michina yekutaura nayo pane imwechete network, ivo havazokwanise kumhanyisa mhosho uye kuwandisa.
Panguva ino, hapana munhu kubva kuRealtek kana Google akauya neshoko rinogona kutisimbisa (kana kutishungurudza), saka kuomarara chaiko kwekutadza hakuzivikanwe. Ichokwadi chete ndechekuti makore matanhatu inguva refu yekusagadzikana kuri muLinux kernel. Izvo uye izvo zvikanganiso zvekuchengeteka zvinogona kushandiswa kure zvinoda kugadziriswa nekukurumidza sezvazvinogona, kuitira kuti nekukurumidza pane gare gare pachave neshanduro nyowani yeRealtek mutyairi weLinux iyo ichagadzirisa chikanganiso ichi. Ndinovimba munguva pfupi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux bug inotisiya isu takatarisana nekurwiswa kuburikidza neWi-Fi